* * Isitudiyo esitsha esinefenitshala * * - I-Airbnb
* * Isitudiyo esitsha esinefenitshala * *
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguEdher & Paola
Inombolo yesatifikethi seCITQ 304968 (Inkampani yeshishini lezokhenketho laseQuebec eneFactory Quebec).
I-Airbnb yethu inesitudiyo sokuqesha esizimeleyo esinendawo yayo yokungena.
- Ibhedi eyisofa enomatrasi owenziwe ngegwebu.
- Iwodrophu -
linazo zonke izixhobo - Igumbi lokuhlambela elipheleleyo.
- I-intanethi ekhawulezayo
Indawo yam yokuhlala ikufutshane ne-metro CARTIER MONTREAL (uhamba imizuzu eyi-2), CO Atlanconfirmation, PARC LA PRAIRIE. Uza kuyivuyela indawo yam yokuhlala, iindawo ezingaphandle, ingingqi kunye nomoya. Indawo yam yokuhlala ibalungele abantu abathandanayo, abahamba bodwa, abahambi ngezoshishino kunye nabantu abafikayo.
INDAWO etofotofo IMIZUZU EYI-2 XA UHAMBA NGEENYAWO UKUSUKA ECARTIER METRO
- imizuzu eyi-20 xa uhamba ngemoto ukusuka
kwidolophu yaseMont-Royal - IKHITSHI ELINENTO YONKE -
UMATSHINI WOKUHLAMBA NOWOKOMISA IMPAHLA UQUKIWE
- imizuzu eyi-15 xa uhamba ngeenyawo ukusuka elunxwemeni - eRivière DES PRAIRIES
Ukufikelela kwisitudiyo kunye nokupaka.
Iindawo ezibangela umdla
eParc des Prairies yeyona inkulu yesibini eLaval. Iindlela ezininzi ziyafikeleleka ngeenyawo okanye ngebhayisekile, kunye nokutyibilika ekhephini kunye nokutyibilika ekhephini ebusika. Kwisayithi, imiboniso emininzi ichaza izityalo ezijikelezileyo.
Embindini, ichibi lityelelwa ziidada eziliqela. I-Rivière des Prairies ikwindawo esemazantsi-ntshona yepaki ngenxa yesikhephe sikamasipala esinokufikeleleka ukusuka e-Boulevard des Prairies.
Phakathi kweMontreal neLaval sisiqithi esibizwa ngokuba yiNgqungquthela (okanye "Řle aux Fesses" kubahlali bangaphambili basekuhlaleni).
Ubugcisa nenkcubeko iLaval House of the Arts
Iziko lokwenza ubugcisa be-Laval (isikolo sangaphambili saseArgenteuil)
Igumbi le-André-Mathieu (Ikholeji yaseMontmorency)
straight - artist-run center
neeresort Berge des
Eudistes I-Berge de
I-Parc Paul-Marcel-Maheu (eyayikade ibizwa ngokuba yiParc Montmorency)
IBon-Pasteur Park Prairie Park
IParc eGagné Cartier Park
Montceau Park IGauthier Park
Fireflies Park I-Chickadee Park
Crochet Park I-Chabrier Park
I-Crossroads of the Boulevards
saseLaval Iziko likaLaval, eChreoney
I-Les Galeries Laval,
eChreoney I-Carrefour Laval,
eChreoney - Indawo yokupaka efumanekayo kuwe.
- imizuzu eyi-2 ukusuka kwisikhululo se-metro.
- Ukuma kwebhasi imizuzu eyi-2 xa uhamba ngeenyawo.
4.82 · Izimvo eziyi-207
I-Parc des Prairies yeyona inkulu yesibini eLaval. Kukho iindlela ezininzi ezihamba ngeenyawo okanye ngebhayisekile, kunye nokutyibilika ekhephini kunye nokutyibilika ekhephini ebusika. Kwisayithi, izihlandlo eziliqela zichaza izityalo ezijikelezileyo.
Embindini, ichibi lityelelwa ziidada eziliqela. Umlambo iPrairie ukumazantsi-ntshona kwepaki njengoko unesikhephe esifikelelekayo ukusuka eBoulevard des Prairies.
Phakathi kweMontréal kunye neLaval sisiqithi esibizwa ngokuba yiNgqungquthela (okanye "Řle aux Fesses" kubahlali abadala basekuhlaleni).
Ubugcisa & Inkcubeko
Maison des art de Laval Centre
de création artistique de Laval (ngaphambili iÉcole d 'Argenteuil)
I-Salle André-Mathieu (i-Montmorency)
IBibliothèque Émile-Nelligan straight - center d '
neeResort Eudist Shore
lwePontmain Parc de l '
Anse-Bleue I-Parc Paul-Marcel-Maheu (eyayikade ibizwa ngokuba yiParc Montmorency)
Bon-Pasteur Parc des Prairies
I-Gagné Parc Cartier
Émile Parc Saint-Claude I-Parc
Cluny Parc Montceau I-Parc Gauthier Parc
Mésanges Parc du
Chabrier Arena Cartier
I-La Croisée des Boulevards
yeMontmorency Le Quartier
Laval Iziko leLaval,
eChreoney I-Galeries Laval eChreoney I-Carrefour Laval eChreoney
Umbuki zindwendwe ngu- Edher & Paola
Ndifumaneka ukuba iindwendwe zifuna inkcazelo okanye uncedo.